जसले ह्विलचियरबाटै चहारे ब्रह्माण्ड- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
चिकित्सकहरूको घोषणाविपरीत स्टेफन हकिङ ५४ वर्ष बढी बाँचे । ह्विलचियरमै जीवन बिताउनुपर्दा पनि उनले त्यसलाई कहिल्यै आफ्नो कमजोरी बन्न दिएनन् । रोगले उनका शरीरका अधिकांश मांसपेशीका चाललाई बन्द गरिदिए पनि उनको दिमाग बन्द गर्न भने मृत्यु मात्रै सफल भयो ।
चैत्र ३, २०७४ स्वरूप आचार्य
काठमाडौँ — क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका भौतिकशास्त्री तथा अत्यधिक रुचाइएका लेखक, जो ह्विलचियरमा ब्रह्माण्ड चहार्थे, गुरुत्वाकर्षण र ब्रह्माण्डको उत्पत्तिबारे नवीन सोच राख्थे र मानव अठोट र जिज्ञासाका प्रतीक थिए— उनै स्टेफन हकिङको ७६ वर्षको उमेरमा बेलायतमा गत बुधबार निधन भयो ।
सबै वस्तुलाई आफूमा समाहित गरेर त्यसको ऊर्जा मात्रै बाहिर फ्याँक्ने ब्ल्याक होल जस्तै थिए स्टेफन हकिङ । उनी विश्वमा भएका सबै सोच र सिद्धान्तलाई आफूमा समाहित गर्थे र नवीन सोच र नयाँ परिधिको विकास गर्थे ।
उनले जुन प्रकारले आफ्नो जीवनलाई ह्विलचियरको सानो घेरामै गुडाएर मस्तिष्कलाई भने ज्ञान र सोचको असीमित ब्रह्माण्डमा पुर्‍याए, त्यसले दुनियाँलाई चकित तुल्याएको थियो, अझै तुल्याइरहनेछ । अब विश्वजगत्लाई १४ मार्चको दिनलाई सम्झन कर लाग्छ । तर, अब उक्त दिनलाई दुई किसिमले सम्झिनुपर्ने बाध्यता हामीलाई आइपरेको छ । त्यसै दिन विश्वले एकातर्फ महान् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई पाएको थियो भने भौतिकशास्त्रका अद्वितीय प्रतिभा स्टेफन हकिङलाई गुमाएको छ ।
यो संयोग आफैंमा निकै चामत्कारिक छ । आजको दिनमा भौतिकशास्त्रमा रुचि राख्ने जोकोहीले आइन्स्टाइन र हकिङलाई एकैसाथ नसम्झी धरै छैन ।
त्यसो त उनको जन्ममितिको संयोग पनि रमाइलो छ । हकिङको जन्म १९४२, जनवरी ८ मा महान् वैज्ञानिक ग्यालेलियो बितेकै ३ सय वर्षपछि भएको हो । ग्यालेलियो गुरुत्वाकर्षणको अध्ययन सुरु गर्ने पहिलो वैज्ञानिक हुन् ।
हकिङले सन् १९८८ मा प्रकाशित गरेको पुस्तक ‘अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम : फ्रम द बिग ब्याङ टु ब्ल्याक होल्स’ ले उनको प्रख्यातिलाई भौतिकशास्त्रका जर्नल र विद्वत् प्रवचनबाट बाहिर निकालेर जनमानसमा पुर्‍यायो । वास्तवमा भन्नुपर्दा उनी आइन्स्टाइनपछिका सर्वाधिक रुचाइएका वैज्ञानिक भए ।
यहाँ लेख्नुहोस्...हकिङले जसरी आफ्नो जीवनलाई ह्विलचियरको सानो घेरामै गुडाएर मस्तिष्कलाई भने ज्ञान र सोचको असीमित ब्रह्माण्डमा पुर्‍याए, त्यसले दुनियाँलाई चकित तुल्याएको थियो, अझै तुल्याइरहनेछ ।
उनको प्रख्यातिबाट हलिउड पनि टाढा रहन सकेन । २०१४ मा उनको जीवनमा आधारित भएर बनाइएको बायोपिक ‘द थियोरी अफ एभ्रिथिङ’ ओस्करका धेरै विधामा छनोट भयो र हकिङका अभिनय गरेका एड्डी रेडमाइनले त सर्वोत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड नै प्राप्त गरे ।
हकिङको खोज आफैंमा निकै अजिब मानिन्थ्यो । उनले ‘ब्ल्याक होल’, कालो नभई त्यसबाट पनि केही प्रकाश निस्कने बताउँदा धेरैले पत्याउनै मानेका थिएनन् । तर उनले त्यो सिद्ध नै गरिदिए ।
बाल्यकालमा औसत विद्यार्थी हकिङले कलेजमा पुगेपछि मात्रै गणित र फिजिक्स आफूलाई अध्ययन गर्न सहज हुने थाहा पाएका थिए । उनलाई मन परेको विषय भनेकै कस्मोलोजी थियो । किनकि त्यस विषयको प्रमुख प्रश्न थियो, ‘ब्रह्माण्डको उत्पत्ति कसरी भयो ?’
उनी यस्ता विचारक पनि थिए जो भिन्न प्रकारले सोच्थे । अरूले भनेको कुरालाई आत्मसात् गर्दै त्यसलाई अर्को तहमा पुर्‍याउनु र अरूले विश्वास नै नगरेको कुरालाई विश्वसनीय बनाउन संघर्ष गर्नु नै मानव सभ्यताका लागि अर्को महान् देन हो उनको ।
मात्र २१ वर्षको हुँदा, १९६३ मा उनमा ‘एमोट्रोफिक ल्याटरल स्केलेरोसिस–एएलएस’ भन्ने स्नायुसम्बन्धी रोग देखा परेको थियो । त्यो रोगको कुनै उपचार नभएका कारण उनको आयु २ वर्षको मात्र रहेको चिकित्सकहरूले घोषणा नै गरिदिएका थिए । तर, उनी चिकित्सकहरूको घोषणाविपरीत ५४ वर्ष बढी बाँचे । रोग देखिएको केही समयपछि नै ह्विलचियरमा बस्नुपर्दा पनि उनले त्यसलाई कहिल्यै आफ्नो कमजोरी बन्न दिएनन् । रोगले उनका शरीरका अधिकांश मांसपेशीको चाललाई बन्द गरिदिए पनि उनको दिमाग बन्द गर्न भने मृत्यु मात्रै सफल भयो ।
उनले भनेका थिए, ‘जब मानिसले आफू अल्पायुमा मर्दै छु भन्ने थाहा पाउँछ तब उसलाई लाग्छ जीवनमा अझै धेरै गर्न बाँकी छ ।’ त्यसैले पनि उनले आफ्नो अध्ययन, अनुसन्धान र शोधलाई कहिल्यै पनि रोकेनन् ।
१९६५ मा उनले भाषाको विद्यार्थी जेन वाइल्डसँग विवाह गरे । जसले उनलाई जीवनमा केही गर्नुपर्ने जोस भरिदियो । उनको रोगले भने उनलाई कस्मोलोजीका अत्यन्तै जटिल र लामा सूत्रहरूमा काम गर्न गाह्रो तुल्यायो । तर त्यही बन्देजलाई पनि उनले हतियारका रूपमा प्रयोग गरे र विचारोत्तेजक सोच र सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्न थाले । जसलाई गणितीय सूत्रमा ढाल्न र प्रमाणित गर्न विश्वभरका वैज्ञानिक तथा विद्यार्थीहरू लागिपरेका छन् ।
निकै रमाइलो स्वभावका भनिएका हकिङको वैवाहिक जीवन भने त्यति सुमधुर रहेन । जेनसँगको २५ वर्ष लामो सम्बन्ध उनको आफ्नै नर्ससँगको हिमचिमका कारण टुटयो । उनले ती नर्ससँगै १९९५ मा विवाह गरे तर त्यो पनि लामो समय चल्न सकेन केही केही वर्षमै टुटयो । त्यसपछि भने उनले विवाह गरेनन् ।
हकिङकै पथ पछयाउँदै ‘हकिङ रेडियसन’ मै विद्यावारिधि गरेका भौतिकशास्त्री तथा कस्मोलोजिस्ट डा. उदयराज खनालका अनुसार उनी यो युगकै महान् वैज्ञानिक र विचारक थिए ।
‘आइन्स्टाइनपछि सबैभन्दा धेरै चर्चित वैज्ञानिक भनेकै हकिङ थिए,’ टेलिफोनमा कुराकानीमा स्तब्ध सुनिएका खनालले भने, ‘ब्ल्याक होलले सबै कुरा खान्छ मात्रै भनेर मानी आएको जगत्लाई त्यसबाट केही चीज बाहिर पनि निस्कन्छ भनेर भन्न सक्ने शक्तिशाली व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो हकिङ ।’
कुनै पनि व्यक्ति एक प्रकारको ज्ञान र सोचको उचाइमा पुगेपछि ऊ विचारक त्यसै हुन्छ । ‘त्यसलै हकिङले दिएका सिद्धान्तहरू केवल सिद्धान्त नभएर जीवनदर्शन पनि हुन्,’ उनले भने ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केन्द्रीय भौतिकशास्त्र विभागका प्रमुख प्राडा बिनिल अर्यालका अनुसार हकिङले अहिलेको मानव सभ्यतालाई नै ठूलो गुण लगाएका छन् । ‘उनले प्रतिपादन गरेका केही सिद्धान्तहरू प्रमाणित भएका छन् भने केही हुने तहमा छन्,’ उनले भने, ‘हकिङ पृथ्वीमा सम्पूर्ण जीवहरूको प्रमुख कारक मानिएका कोषहरूको उत्पत्तिको कारण पत्ता लगाउने कोसिसमा थिए, जुन धेरै हदसम्म अगाडि बढेको छ । त्यो भविष्यमा प्रमाणित हुन सक्छ ।’
प्राडा अर्यालका अनुसार न्युटनले ‘म्याटर’ र ‘स्पेस’ एकअर्काबाट निरपेक्ष हुन्छन् भन्ने तथ्यका आधारमा पृथ्वीमा रहेका वस्तुहरूको बारेमा विश्लेषण गरेका थिए । त्यसलाई एक कदम अगाडि बढाउँदै म्याटर र स्पेस भनेका एकअर्काका परिपूरक हुन् र उनीहरूबीच सापेक्ष सम्बन्ध रहन्छ भन्ने तथ्य आइन्स्टाइनले सिद्ध गरे । ती दुवैभन्दा अझ धेरै अगाडि गएर हकिङले आइन्स्टाइनको सापेक्षतावादको सिद्धान्तलाई कस्मोजोलीमा नै प्रयोग गर्न मिल्ने बनाइदिए ।
‘हकिङले रिलेटिभ स्टेट कस्मोलोजी सिद्धान्तको विकास गरे,’ उनले भने, ‘जसका कारण आइन्स्टाइनको सूत्रलाई जहाँ जसरी प्रयोग गरे पनि सही हुने प्रकारका नयाँ सूत्रहरूको विकास गरे ।’ उनको अनुसार हकिङको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देन भनेको उनले क्वानटम मेकानिक्सलाई कस्मोलोजीमा जोड्ने काम गरेका छन् ।
शरीरमा मुस्किलले चल्ने केही मांसपेशीका सहायतामा जीवन चलाएका हकिङले प्रकाश पनि उम्कन नसक्ने ब्ल्याक होलको गहिराइमा प्रवेश गरेर गुरुत्वाकर्षणका गुणहरू निकाले, त्यसैले पनि उनी आफ्नो समयका महान् अभियन्ता कहलाइएका हुन् ।
‘ब्ल्याक होलले सबै वरपरका वस्तुलाई आफूतिर खिच्छ र त्यो समयको अन्तरालसँगै ठूलो हुन्छ भन्ने कुरामा कसलाई पो विश्वास थियो र,’ प्राडा अर्यालले भने, ‘तर उनले ब्याल्क होल समयको अन्तरालसँगै ठूलो मात्रै हुने होइन । त्यो विस्फोट पनि हुन्छ र त्यही विस्फोटका कारण यो ब्रह्माण्ड सिर्जना भएको हो भन्ने बताए ।’
अर्यालका अनुसार हकिङको सोचका कारणले ब्ल्याक होल संहारकर्ताबाट सिर्जनाकर्ताको भूमिकामा रूपान्तरित भएको हो । ‘हाम्रो वरपरको यो विशाल ब्रह्माण्डको रचना कसरी भयो भन्नेसम्म हामीलाई अहिले हकिङकै कारणले थाहा भएको हो,’ उनले भने ।
खगोलविद् तथा नास्टका प्राज्ञ इ. ऋषि शाहका अनुसार भने हकिङ महान् भौतिकशास्त्री मात्र नभई महान् विचारक पनि हुन् । उनले विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्ने क्रममा थुप्रै नवीन विचारहरू पनि यो विश्वलाई दिएका छन् । ‘हकिङ के थिए भनेर दुई शब्दमा भन्न सकिँदैन किनभने उनले ब्रह्माण्डबारे धेरै नयाँ तथ्य हामीलाई सिकाएका छन्,’ उनले भने, ‘अति कठिन शारीरिक अवस्थामा पनि एउटा मान्छेले हासिल गर्न सक्ने असीमित ज्ञानको भण्डारबारे उनले भविष्यका पुस्तालाई सिकाएका छन् ।’
उनी यस्ता व्यक्ति थिए जसले मानव विचारका सबै परिधिहरूलाई यति ठूलो बनाइदिए कि त्यसमा ब्रह्माण्ड नै सानो लाग्न थालेको छ । एक पटक उनले कतै भनेका थिए, ‘मलाई मान्छेहरूको मनोभावले सबलांग भएसम्म शारीरिक रूपले विकलांग भएर केही फरक पर्दैन भनेर जगत्लाई देखाउनु छ ।’
त्रिचन्द्र कलेजकी भौतिकशास्त्रकी प्राध्यापक डा. नीलम श्रेष्ठ भने अरूभन्दा केही भिन्न तरिकाले हकिङलाई सम्झन चाहन्छिन् । उनको अनुसार हकिङको सिद्धान्तहरूको गहिरो अध्ययन गर्दा अर्को ग्रह नै बनाएर त्यहाँ मानव बस्ती बसाल्न सकिन्छ भन्ने आभास हुन्छ । ‘उहाँ बाँचिरहेको भए हामीले पृथ्वीजस्तै अर्को ग्रह बनेको पनि देख्न सक्थ्यौं होला,’ उनले भनिन् ।
प्राज्ञ शाहले भनेजस्तै हकिङ वास्तवमै यस्ता व्यक्ति थिए जसलाई बयान गर्न धेरै शब्द पनि चाहिन्छ र शब्द पनि चाहिँदैन किनकि ‘शून्यबाट सुरु भएर शून्यमा नै बिलाउने क्षमताका लागि कि ब्ल्याक होल हुनुपर्छ या स्टेफन हकिङ नै ।’
जो आँखाले बोल्थे
हकिङलाई सामान्य मानिसहरूले उनको ह्विलचियरमा जडित कम्प्युटर स्क्रिनका लागि पनि चिन्थे । वास्तवमा त्यो एउटा स्क्रिन मात्रै नभएर उनको जीवन नै चलाउने यन्त्र थियो ।
कुनै समय आफ्नोअगाडि राखिएको अक्षरहरूको बोर्डमा एउटा एउटा शब्दमा आँखा टक्टकाएर संवाद गर्नुपर्ने हकिङका लागि त्यो स्क्रिन आफैंमा वरदान थियो । उक्त स्क्रिनको सहायताले उनी बोल्ने मात्रै होइन केही सामान्य कामहरू पनि आफैं गर्न सक्षम भएका थिए । हकिङको स्थिति देखेर कम्प्युटरविज्ञ वाल्टर वोल्टोजले उनका लागि औंला र आँखाकै साहयताले पनि चलाउन मिल्ने कम्प्युटर विकास गरिदिए । त्यसमा सबै अंग्रेजी अक्षरका साथै २ हजार ५ सय शब्द पनि थिए ।
अक्षर र शब्दहरूको सहायताबाट उनले वाक्यहरू बनाउन सक्थे जुन स्पिच सिन्थेसाइजरको मद्दतले आवाज बनेर निस्कन्थ्यो । त्यो सबै सिस्टम उनको मोटरराइज्ड ह्विलचियरमा जोडिएको थियो । कहिलेकाहीं औंला पनि चलाउन नसक्दा दायाँ गालाको मांसपेशी वा आँखा झिम्काएरसमेत आदेशहरू दिन सक्थे । उक्त सिस्टमले उनलाई ढोका खोल्न, लगाउन, टेलिफोन गर्न र इन्टरनेट चलाउन पनि सहज बनाएको थियो ।
कम्प्युटरको सहायताले उनले प्रतिमिनेट १५ शब्द मात्रै बोल्न सके पनि त्यो आफ्नो आवाज पूर्ण रूपमा हराउँदाको बखतभन्दा राम्रँे भएको उनको सोचाइ थियो ।
उक्त मोटरराइज्ड ह्विलचियरकै सहायतामा विश्वका धेरै ठाउँमा पुगेका उनलाई एक म्यागजिनका पत्रकारले धेरैजसो समय केको बारे सोच्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनको उत्तर थियो, ‘आइमाईहरूको बारे । उनीहरू पूर्ण रूपमा रहस्यमयी हुन्छन् ।’
हकिङले विश्वमा एक वैज्ञानिकले चाहेका सबै कुरा प्राप्त गरे । तर, उनको हातमा नोबल पुरस्कार भने पर्न सकेन । त्यसबारे उनी भन्ने गर्थे, ‘उनीहरू प्रमाणित भएका तथ्यहरूलाई मात्रै पुरस्कृत गर्छन् । मैले भनेका तथ्यहरू देख्न निकै कठिन छन् ।’
उनी मानव सभ्यतालाई अनन्तकालसम्म जोगाउनका लागि अन्तरिक्षको अध्ययन र शोध गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँथे । ‘पृथ्वीमा रहेका सबै कुरा कुनै प्रकोपका कारण विलुप्त हुने खतरामा छन् । त्यो आणविक युद्धका कारण पनि हुन सक्छ वा मानिसहरूले आफैं बनाएका भाइरसका कारण अथवा हामीले विकसित पनि नगरिसकेका कुनै खतराबाट,’ हङकङमा भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए ।
(विभिन्न एजेन्सीका लेख, रचना तथा कुराकानीमा आधारित)
मृत्यु– म मृत्युसँग डराउँदिनँ, तर मलाई मर्ने हतारो पनि छैन । मलाई अझै धेरैथोक गर्नु छ ।
पुनर्जन्म– म दिमागलाई कम्प्युटरको रूपमा लिन्छु । जुन कुनै सामान बिग्रिएपछि काम गर्न छोड्छ । बिग्रिएका कम्प्युटरहरूका लागि न स्वर्ग हुन्छ न पुनर्जन्म । त्यो त अन्धकारसँग डराउनेका लागि भनिएको कथा हो ।
जीवनको लक्ष्य– मेरो जीवनको सामान्य लक्ष्य छ । म ब्रह्माण्डलाई पूर्ण रूपमा जान्न चाहन्छु । यो किन यस्तो छ, के कारणले यस्तो छ र केका लागि यस्तो छ ।
जोखिम– म मानिसहरूलाई कोही पनि आफ्नो शारिरिक विकलांगताका कारण सीमित हुँदैन जबसम्म ऊ मनोभावबाटै विकलांग हुँदैन भनेर देखाउन चाहन्छु ।
अपूर्णता– अपूर्णता नभएको भए तपाईं र मेरो अस्तित्व नै हुँदैन थियो ।
वैज्ञानिक खोज– म यसलाई यौनसम्पर्कसँग तुलना त गर्दिनँ, तर यो धेरै समय रहन्छ ।
लीलाहरूमा इन्द्रबहादुर राई
इन्द्रबहादुर राईको जीवन नै एउटा प्रयोगशाला हो । सामाजिक यथार्थवाद, तेस्रो आयाम र लीला गरी तीन चरणमा बाँडिएको उनको लेखनयात्रा वास्तवमा जीवनको खोजी हो ।
फाल्गुन २६, २०७४ डा. राजेन्द्र भण्डारी
काठमाडौँ — ६ मार्च २०१८ मा नेपालीभाषीहरूको पोथ्राबाट इबराको चिदात्मा–चरो फुर्र उडेर अनन्त आकाशमा बिलायो । ‘अर्को इन्द्रबहादुर राई कहिले पाइएला’ को आशामा हामी भविष्यतिर आँखा ओछयाइरहनेछौँ ।
इन्द्रबहादुर राईको निधन भनेको गाउँबीच गजधम्म बसेको विशालकाय वटवृक्ष गडयाम्म ढल्नु हो । भारतका नेपालीभाषीहरूको बौद्धिक ओत, अडेसा, प्रेरणामूर्तिको सतत क्षय हो । एकाएक टुहुरो हुँदाको अनुभव हो । ६ मार्च २०१८ को साँझले यस्तै अवसाद बोकेर ल्यायो । नेपाली साहित्य नै हल्लियो । पराकम्पन अझै छ । ६ मार्चको ‘रातभरि हुरी चल्यो’ । ७ मार्चमा ब्युँझिँदा घरको गारो ढलेको पायौँ । छानु उडेको पायौँ । मनमा गह्रौँ लोला झुन्डेको अनुभव गर्‍यौँ ।
इन्द्रबहादुर राईको जीवन नै एउटा प्रयोगशाला हो । सामाजिक यथार्थवाद, तेस्रो आयाम र लीला गरी तीन चरणमा बाँडिएको उनको लेखनयात्रा वास्तवमा जीवनको खोजी हो । यथार्थकै पडताल हो । उनले जेजे छोए त्यो सुन भयो । आफैँले आफैँलाई सुधारिरहे उनले । सुधार्ने क्रममा उनले जन्माएका रचना नेपाली साहित्यकैसम्पत्ति भए ।
सन् १९५९ को सुरुतिरै लेखिसकिएको तर १९६४ मा छापिएको ‘आज रमिता छ’ उपन्यासको एउटा पात्र भूदेवलाई इन्द्रबहादुर राई भन्न लाउँछन्— ‘राम्ररी नहेर्नू । तैँले तेरै बाबुलाई पनि राम्ररी एकोहोरो लाएर हेरिरहिस् भने एक छिनमा अर्कै कोही मान्छे जस्तो लाग्छ, त्यति बेला बाबु छैन भन्नु ?’ तर आफैँले जन्माएको पात्र भूदेवको भनाइ के मान्थे इबरा १ उनले राम्ररी हेरे । अनि पाए— अगमसिंह गिरीहरूले लेख्दै ल्याएको साहित्य त चेप्टो पो रहेछ । सतही पो रहेछ । अनि आख्यानमा, कवितामा गहिराइको खोजी गर्दै उनी पुगे आयामिक लेखनमा । साथमा लिए ईश्वरवल्लभ र बैरागी काइँलालाई । यथार्थ अलग्गै हुन्छ, हामीले देखेअनुरूप हुँदैन । अनुभूतिको आफ्नै वस्तुता हुन्छ । वस्तुता चिन्दै, गहिराइ खोज्दै इबरा पुगे बाङदेल, पिकासो, मतिश, माने, सेजाँका अमूर्त र घनवादी चित्रसम्म । चुडलाई अचेतनबारे सोधे । अस्तित्ववादी हुसर्न, सात्र्रहरूलाई भविताबारे सोधे । अनि जन्मियो नेपाली साहित्यमा तेस्रो आयामिक लेखन । इबराको ‘कथास्था’, ईश्वरवल्लभका ‘आगोका फूलहरू हुन्, आगोका फूलहरू होइनन्’ र ‘एउटा सहरको किनारामा’ आदि अनि बैरागी काइँलाको ‘बैरागी काइँलाका कविताहरू’ आदि । नेपाली साहित्यमा यिनीहरू नौला परिकार भए । पाठकहरू कति अलमलिए । कति गम्भीर भए । साहित्य भनेको खेलाँची होइन रहेछ भन्ने ज्ञान पाए । सृजन, साहित्य र जीवनबारे बालकृष्ण समले खुब चिन्तन गरेथे । उनीपछि इबराले गरे । जाँ पल सात्र्रको ‘साहित्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिऔँ’ भन्ने भनाइलाई उनले अक्षरश: पालन गरे ।
इन्द्रबहादुर राईले आफैँलाई प्रश्न गरे । के वस्तुता भन्ने हुन्छ ? उत्तर पाए— हुँदैन । ‘किन हुँदैन ?’ को उत्तर उनले ज्याक डेरिडाको डिकन्स्ट्रक्सन, हाइजनबर्ग र बोहर आदिको क्वान्टम सिद्धान्त, पूर्वीय लीलावाद र मायावादमा पाए । पाएको ठाने । ‘कठपुतलीको मन’, ‘पहेँलो दिन’,‘झ्याल’ आदि कृतिहरूमा लीलालेखन सिद्धान्तलाई समाविष्ट गरे । तेस्रो आयामको वस्तुतालाई खण्डन गर्न उनलाई डेरिडाको ‘भाषाखेल’ सिद्धान्त र आधुनिक भौतिकीको क्वान्टम सिद्धान्तले सर्वाधिक बल पुर्‍यायो । डेरिडाले पाठको अर्थ सतत अनन्तिम हुने र अर्थ–स्थगन भइरहने भन्नु र क्वान्टम सिद्धान्तले परमाणुको स्थिर रूप कहिल्यै हुँदैन भन्नु समकक्षी माने इबराले । अनि गोपिनीहरूले कृष्णका अनेक रूप एकैसाथ देख्नुको प्रसङ्ग पनि जोडेर हेर्दा समग्रमा जीवन–जगत्का यावत् घटनाचक्रलाई कुनै निर्दिष्ट दृष्टिकोणले हेर्न नमिल्ने पनि स्वत: तर्कसङ्गत बन्न पुग्यो । गुरुप्रसाद मैनालीकृत ‘परालको आगो’ कथालाई उनले यही दृष्टिबाहुल्यको कसीमा प्रस्तुत गरे । यसरी लीलालेखनको सिद्धान्त र व्यवहार तयार भयो । लीलालेखनले सामाजिक समस्याहरूलाई नजरअन्दाज गर्‍यो र यो लेखन दायित्वविहीन लेखन बन्यो भनेर वामपन्थी साहित्यकारहरू इबरासित रिसाउनसम्म रिसाए । उनलाई सैद्धान्तिक प्रतिवाद गर्न नचाहेर वा नसकेर हो, कतिले त उनको व्यक्तिगत जीवनको समेत धज्जी उडाए । उसो त आयामकालदेखि नै वाममार्गीहरू उनीप्रति रुष्ट थिए । स्थानीय समाचारपत्रतिर एकापट्टि इबरा, अर्कापट्टि वामधर्मी मोहन दुखुन र बद्रीनारायण प्रधानमाझ निकै लामै चर्काचर्की बहस चल्यो । पछि इबराले ‘साहित्यको अपहरण’ नामले पुस्तिकै पनि छापे । यो क्रम उनको अन्तिम कालसम्मै कायम रहयो । ‘पाण्डुलिपि’ पत्रिकामा पनि उनलाई वामधर्मीहरूले गरेको उछितो पढ्न पाइन्छ ।
आफ्नो लेखनयात्रामा प्रयोगको कोसेढुङ्गा थप्दै जाने इबरा तर अतिप्रयोगमा विश्वास गर्दैनथे । बैरागी काइँलाको प्रयोगधर्मिता मध्यम आँचको तर ईश्वरवल्लभको भने पोल्ने खालको थियो । ईश्वरवल्लभको अतिवादलाई अप्रत्यक्ष इङ्गित गर्दै उनले लेखेका छन्— ‘एउटा खोला बग्दै छ भने खोला त बगेर जान्छ, त्यसको प्रधान धारा बगेर जान्छ, तर त्यसको छेउमै कहीँनेर पानी घुमेर बसिरहेको हुन्छ, छाडिएको पानी, ब्याकवाटर भन्छन् अङ्ग्रेजीमा, मूलधारा कहाँ पुगिसक्यो हामी पछाडिएको धारालाई लिएर बस्दछौँ । फेरि ब्याकवाटर नहुने बलमा जब हामी एकदम अघि बड््ने भएर जान्छौँ— आयामिक लेखन अघाडि बड्ने एउटा उद्यम थियो । एउटा अर्को हुन्छ, साह्रै अघाडि बड्न खोज्यो एक थोपा पानी भने त्यो मूलधारादेखि चुँडिन्छ, अनि मूलधारादेखि चुँडिएपछि त्यो बाँच्न सक्तैन । त्यसले एक थोपा पानी निस्केर सम्झौँ खोलालाई पनि जित्ने गरी, त्यो खोला ढिलो हिँडयो, म बसेको खोला ढिलो हिँडयो भनेर, एक थोपा पानी उफ्रेर अघाडि बढेछ भनेदेखिन् त्यो थोपा ढुङ्गामाथि गएर बस्ला, इन्द्रेणी देखाउला त्यहाँनेर त्यल्ले, इत्यादि, त्यल्ले मोती देखाउला त्यहाँनेर केही छिनको लागि तर त्यो बाँच्तैन । आयामिक साहित्य पनि यस्तै एउटा उछिट्टिएको पानी जस्तो साह्रै अघि बडेको थियो । अब समय आएको छ यसलाई फेरि त्यही प्रधान धारामा हाल्नको निम्ति, अब हामीलाई परेको उत्तरदायित्व त्यो छ ।’ (सन्दर्भमा ईश्वरवल्लभका कविता, १९७६, पृष्ठ ५३)‘विपना कतिपय’, ‘कथास्था’, ‘कठपुतलीको मन’— सबैमा यथार्थको खोजी छ । निक्र्योल छ । सामाजिक दृश्यसत्ता, आन्तरिक भावसत्ता र दृष्टिबाहुल्यसत्ता— यी तीन यथार्थसत्ताको उत्खननमा इबराको आख्यान तन्किएको छ । उनी न सामाजिक व्यवहारले, न त साहित्यलेखनले, कहिल्यै जीवनदेखि भागेनन् । बिमार नचिनी ओखती गर्दा लाग्दैन ।
यसैले उनी बिमार चिन्नपट्टि लागे । चिन्दैचिन्दै उनी लीलासम्म पुगे । लीलालेखनमा भिन्न दृष्टि स्वागत्य मानिन्छ । उनले ठहर्‍याएको यथार्थ अरूको सँग नमिल्न पनि सक्छ । यही दृष्टिभिन्नता नै संसारको जालो हो । सङ्घर्षको कारण हो । सामाजिक विषमताको जड हो । हुनेखाने र हुँदा खानेको सङ्घर्षमा इतिहास बनिँदै आएको भन्छन् वामधर्मीहरू, तर इबरा भन्छन्— संसार दृष्टिकोणहरूको मेला हो । बुद्धले दु:खको मूल कारण अविद्या हो भने । इबराको रुझान समाजको सतही अध्ययनतिर थिएन । उनी चूडान्त सत्त्व चिन्न चाहन्थे । ढिलोछिटो सबैले नै चूडान्त सत्य जान्न चाहिरहेकै हुन्छन् । यसरी हेर्दा इबराको लेखनयात्रा दार्शनिक यात्रा पनि हो ।
‘हामी शास्त्रसम्मत साहित्य लेखौँ’ (सन्दर्भमा ईश्वरवल्लभका कविता, १९७६, पृ. ५३) भन्ने बीजवाक्य नै लीलालेखनमा आइपुग्दा वृक्ष बनेको हो । इबरा भन्छन्— कृष्णले अर्जुनलाई भनेको ‘निमित्तमात्रं भव सत्यसाची’ वास्तवमा रचनाकारलाई समेत दिइएको परामर्श हो । वस्तुताबोधको पछिल्तिर यही निष्काम भाव अडेसो छ । योगी श्रीअरविन्दले ‘भविष्यको कविता’ नामक ग्रन्थमा चेतनाका विभिन्न स्तरअनुसार रचनाकार्य निस्पादित हुन्छन् भनेका छन् । जस्तो चेतना, उस्तै रचना । चेतनाविस्तारण र चेतनापरिष्करण योगद्वारा सम्भव छ । इबराले श्रीअरविन्दको काव्य ‘सावित्री’ लाई ‘यौगिक साधनासहितको उच्चमनस्ले देखाइ र लेखाइ’ (ऐ., पृष्ठ ५७) भनेका छन्, उदाहरण मानेका छन् । अबको कविता योगले लेखिनुपर्छ भनेर कहीँ कतै उनले भनेका छन् । ‘साहित्य अघिदेखि यौगिक र मोक्षदा मानिएकै हो’ (ऐ., पृष्ठ ५७) बाट उत्प्रेरित इबरा लीलामा मोक्षदा साहित्यका अभियन्ता बनेका हुन् ।
इन्द्रबहादुर राईको उपस्थिति जुनसुकै गोष्ठी, सभा र भेलाहरूमा आकर्षणविन्दु बन्थ्यो । सन् १९८८ मा ‘तेस्रो आयामको पच्चीसौँ वर्षगाँठ’ को आयोजना झापाको धुलाबारीमा गरिएको थियो । त्यहाँ उनले लीलालेखन सिद्धान्तको व्याख्या गर्न चार घण्टा लगाए । तेस्रो आयाम, वस्तुता, सामाजिक यथार्थ हुँदै आधुनिक भौतिक विज्ञानका नवआविष्कारलाई समेत गोड्न भ्याए । तर चाखलाग्दो कुरो के छ भने, लगभग चार घण्टासम्म श्रोताहरूले मन्त्रमुग्ध भएर सुनिरहे । इबराको बोली मह थियो । सन् ’७० को दशकभरि नै दार्जिलिङ–डुवर्समा नेपाली भाषा आन्दोलन चर्केको थियो । इबरा यसका स्टार आकर्षण थिए । मह वक्ता थिए । भारतका प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईले ‘नेपाली भाषा विदेशी हो, भारतको संविधानमा यसले कसरी स्थान पाउँछ ?’ भनेर भारतका नेपालीभाषीहरूलाई चिढयाएका थिए । सबै आन्दोलित थिए । पथसभा, धर्ना, जुलुस, सभा, सत्याग्रह दैनिकीजत्तिकै थिए । इबरा यस आन्दोलनमा पूरै होमिएका थिए । कतिसम्म भने, उनले सामाजिक, जातीय कार्य गर्नकै निम्ति सन्त जोसेफ कलेजबाट प्रोफेसरी छोडिदिए ।
इन्द्रबहादुर राई अङ्ग्रेजी विषयका प्रोफेसर (प्रवाचक) । तर नेपाली भाषामा भाषण दिँदा, वक्तव्य प्रस्तुत गर्दा अङ्ग्रेजी शब्द अति नै न्यून मात्रामा चलाउने । नेपाली शब्दले मात्रै काम चल्ने रहेछ — मलाई लाग्थ्यो । हाइजनबर्ग, नील–बोहर, बेल, कार्ल माक्र्स, डेरिडा, रोला बार्थ, बोद्रिला, म्याक्स प्लाङ्क, टेरी इगल्टन, जेमेसन जस्ता वैज्ञानिक–दार्शनिकहरूलाई उनी घरगाउँले जस्तै परिचित र सरल बनाएर बुझाउँथे ।
इन्द्रबहादुर राई विनम्रताका प्रतिमूर्ति थिए, तर आफ्नो अवधारणाको अनुसरण गर्नेहरूसँग भने उनको थप निकटता रहन्थ्यो । लेखनमा उनी सम्झौता गर्दैनथे । उनको भाषणमा प्रयुक्त भाषा र साहित्यमा प्रयुक्त भाषामा ठूलो अन्तराल थियो । सिकारुहरूलाई उनको ‘वरद हस्त’ सधैँ उपस्थित हुन्थ्यो । उनी हदैका अध्येता । एकदुई दिन टाढा कतै जाँदा वा अलमलिँदा उनलाई छटपटी हुन्थ्यो । ‘यस समयमा केके पढिन्थ्यो, केके गरिन्थ्यो’ भनिरहन्थे । पछिल्ला केही वर्षहरूमा उनलाई सभा, सम्मेलन र गोष्ठीहरूतिर जान झर्को लाग्न थालेको थियो ।
सधैँ सफासुग्घर, चिरिच्याँट्ट भएर हिँड्ने इबराको पारिवारिक जीवन अति सुमधुर थियो । परिवारकै ऊर्जाबाट उनी ताजा भइरहन सक्थे । सक्रिय भइरहन सक्थे । जता गए पनि धर्मपत्नी मायालाई साथै लान्थे । ‘एउटा दिनको सामान्यता’ कथा झन्डै उनकै आत्मकथाको अंश हो । कथाकी मूल पात्राको नाम पनि ‘माया’ नै छ । कथामा इबराको पुरानो मूल घर तुङसुङको बारीको झल्को पाइन्छ । ‘मूलाको बीउ तिमीले पातलो छरेछौ, माया’— प्रथम पुरुष पात्र म भन्छ । यस कथामा पाइने सरस, सौहार्दपूर्ण दाम्पत्य उनकै दाम्पत्य हो भन्न मन लाग्छ । एकपल्ट एउटा समालोचना सङ्ग्रह ‘प्रतिमान’ का लागि रचना माग्न म उनको तुङसुङ घरमा पुगेको थिएँ । ‘पारिश्रमिक कति दिने ?’ सोधेका थिए फोनमा । हाम्रोतिर लेखका निम्ति पारिश्रमिक हुनै नसक्ने कुरा थियो । अझै छ । कुरो सन् ’८३–८४ तिरको हो । ‘हुन्छ, दिन्छु तीन सय,’ मैले भनेको थिएँ । घर पुग्दा बाहिर झलमल्ल घाम लागिरहेको । दार्जिलिङको मार्च–अप्रेल रमरम हुन्छ । घाम तापिरहूँ लाग्ने । बाहिर मुडामा इबरा नाङ्गैभुतुङ्गै थिए । गुरुआमा मायादेवीले उनलाई नुहाइदिँदै थिइन् । यो दृश्यले मेरा आँखा खुसीले रसाए । कस्तो मीठो दृश्य १ दाम्पत्य प्रेम, सुखी गृहस्थी, पुगीसरी परिवार । हुनुपर्ने त यस्तो पो १ ‘एउटा दिनको सामान्यता’ पढ्दा तुङसुङको इबराको मूल घर, बारी, अलिक मुनिको जङ्गलको दृश्य आँखामा नाच्न थाल्छ ।
इन्द्रबहादुर राईलाई टाई–सुटमा सजिएको मैले कहिल्यै देखिनँ । घरमा उनी काँसको बटुकामा वा पित्तलको ठाडे बटुकामा चिया पिउँथे । आँखा चिमचिम गरिरहने तर आफू नहाँसी अरूलाई हँसाउनमा खप्पिस । दार्जिलिङमा सन् १९८६ मा सुवास घिसिङको नेतृत्वमा आन्दोलन चर्किएको थियो । लक्खीदेवी सुन्दास, इन्द्रबहादुर राई, प्रेम आले, कुमार प्रधानहरू भाषाको नाम ‘नेपाली’ भन्न रुचाउने । भाषासङ्ग्रामीहरू सबै । सुवास घिसिङ ‘गोर्खा भाषा’ भन्नुपर्छ भन्ने ।
दुई खेमामा कुरा मिलेको थिएन । इन्द्रबहादुर राई, लक्खीदेवी सुन्दासका घरहरू असामाजिक तत्त्वहरूले तोडफोड गरेका थिए । ढुङ्गा हानेका थिए । सीधासाधा जनता सुवास घिसिङको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामा सामेल थिए । त्रासको वातावरण थियो । इबराले एक दिन गफैगफमा भने, “हेर्नु न भाइ, हिन्दी फिल्ममा भिलेनले नानीको अपहरण गर्छ, ‘फिरौती दे, होइन भने नानी खलास’ भन्छ । एक हातमा बन्दुक, अर्को हातमा नानी । गुन्डालाई ताकेर हानूँ त नानीलाई लाग्ने डर । अब यहाँको जनता त त्यही नानी जस्तो पो भयो ।’ उपर्युक्त व्यङ्ग्यमा नहाँसी सकिँदैनथ्यो ।
सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिले नेपालको ठूलै भूभाग ब्रिटिस भारतमा मिल्न आएको थियो । माटोसितै भारतमै थातथलो भएर बस्ने, गोर्खा पल्टनबाट सेवानिवृत्त भई भारतलाई नै घर रोज्ने, सन् १८४० को दशकदेखि चियाको बुट्टामा पैसा टिप्न आएका श्रमपरायण नेपालीभाषीहरूलाई भारतले, बङ्गालले र देशका सर्वसाधारणले सधैँ ‘पराई’ ठानेका, सधैँ ‘पाखा’ पारेको इन्द्रबहादुर राईलाई पाच्य भएन । कसैलाई पनि हुँदैन । यसैले वासभूमिको माग डढेलोझँै हुरहुर्ती बल्न थाल्यो, बलिरहेको छ । इन्द्रबहादुर राईहरू सन् ’८० को पूर्वाद्र्धमा ‘प्रान्त परिषद्’ भन्ने दलमा रही वासभूमिको युद्धमा होमिए । पश्चिम बङ्गाल र राष्ट्रिय सरकारहरूले अनेक कुचक्र रची यो आन्दोलनलाई दमन गर्न थाले, गरिरहेकै छन् । आफू सक्रिय राजनीतिमा नरहे पनि इबराले यस आन्दोलनलाई पथप्रदर्शन गरिरहे । आशीर्वाद दिइरहे । साहित्य र सामाजिक मुद्दालाई उनले मुछ्न चाहेनन् । साहित्य मोक्षदा हुनुपर्छ — उनी ठान्थे ।
३ फरवरी १९२७ मा बालासन नदीको बगरमा हस्तमाया देवान र रणवीर चामलिङका काखमा जन्मेका इन्द्रबहादुर राईको बाल्यकाल तुङसुङमा बित्यो । दार्जिलिङ सरकारी स्कुलका शिक्षक कमलकुमार शर्मासँग पढ्ने इबारा कहिले डबल प्रोमोसन, कहिले प्रथम तरप्रायश: डिस्टिंक्सनमा उत्तीर्ण हुँदै अघि बढेका थिए । दुई छोरी र एक छोराका पिता इबरा छ जना नाति–नातिनाका हजुरबा थिए । ‘मैले मायादेवीलाई बिहा गरेर सबैभन्दा बुद्धिमानी काम गरेछु’ भन्ने इबराको दाम्पत्य जीवन उदाहरणीय थियो ।
६ मार्च २०१८ मा नेपालीभाषीहरूको पोथ्राबाट इबराको चिदात्मा–चरो फुर्र उडेर अनन्त आकाशमा बिलायो । नेपालभाषी संसार, नेपाली साहित्य सधैँलाई एउटा ठूलो रिक्तताको सम्मुखीन बन्न पुग्यो । इबराको अनुपस्थिति सधैँ खट्किरहनेछ । ‘अर्को इन्द्रबहादुर राई कहिले पाइएला’ को आशामा हामी भविष्यतिर आँखा ओछयाइरहनेछौँ ।
(भण्डारी ३२ वर्षे प्राध्यापनपछि अहिले भारतको कालेबुङमा सेवानिवृत्त जीवन बिताइरहेका छन् । पाँच कवितासङ्ग्रहका यी स्रष्टाका कविता भारतका अन्य भाषासहित स्पेनिस, जर्मन, इटालियन भाषामा पनि अनूदित छन् ।)
प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७४ १०:०९